Shiinaha Cidiiyaha dhoobada ah ee Shiineeyska ah oo loogu talagalay Makiinada Manicure-ka ee Korantada Qalabka Mashiinka Qalabka Maqaarka ee Dhimashada Faylka Cidiyaha Maqaarka ee Farshaxanka Farshaxanka Polish Warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | Rongfeng
Qalabka Ciddida dhoobada ah ee Manicure Drills Mashiinka Qalabka Qalabka Cidiyaha Maqaarka ee Dhintay Qalabka Ciddida Polish
Xirfadlaha Dahaarka Dahabka ah ee...
Plati Polishing la bedeli karo...
Cidiyo cidi cidhif gooye akrili...
Cidiyaha Ceramic Drill Bit ee...
Qalab Ciddiya, Qalab Kalkaaliso Ciddiya
Ceramic, Birta Aan Lahayn
Qalabka Daryeelka Quruxda Cidiyaha
- 1pcs cidiraha daloolista cidiyaha leh cabbirka 3/32 ″ shank si ay ugu habboonaato inta badan laylisyada korantada
- Iyada oo leh 1pcs oo xidhmo ciid ah oo loogu talagalay buuxinta ciddiyaha
- Waxa ugu fiican ee lagu beddeli karo qashinka ciddiyaha
- Beddel waara
Isticmaal si aad u nadiifiso cidhifyada ciddiyaha / qaabaynta cidhifyada / dusha ciddiyaha akril iyo cidi jel.
ka saarida xabagta xad-dhaafka ah iyo walxaha dhinaca hoose ee cidiyaha akril / jel.
Ku habboon dhammaan heerka 3/32 ″(2.35mm) Mashiinnada Ciddiyaha Faylka Qulqulka Korontada.
Qalabkan xirmada buuxinta ciddiyaha inta badan loo isticmaalo mashiinka daloolista korantada ciddiyaha.
- 1pcs/set, oo ku habboon inta badan laylisyada korantada ee farshaxanka ciddiyaha.
- Waxaa lagu marsan karaa cidiyaha dhabta ah, cidiiyaha jel & cidiyaha akril.
- Sanduuqa asalka ah: Haa
- Midabka: Caddaan
- Xajmiga ulaha Bit: 2.35mm dhexroor
1. Hubi cidiyeerka ka hor isticmaalka.
2. Had iyo jeer xidho muraayadaha badbaadada indhaha.
3. Isticmaal xirfadeed oo keliya.
4. Ha isticmaalin haddii la tuuro.
5. Ka ilaali meel aanay carruurtu gaadhi karin.
6. Ka nadiifi qashinka ciddiyaha markaad isticmaasho ka dib.
1.Q: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
J: Waxaan leenahay warshad noo gaar ah.
2.Q: Sidee loo helaa liiska qiimaha?
A: Liiska qiimaha Pls iimayl / wac / fakis noogu soo dir adiga sida magaca alaabta oo ay weheliso faahfaahinta (magaca, cinwaanka faahfaahinta, taleefanka, iwm), waxaanu kuugu soo diri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
3.Q: Alaabta ma haystaan ​​shahaadada CE/ROHS?
J: Haa, waxaan ku siin karnaa CE/ROHS shahaado ah oo adiga kugu saabsan shuruudahaaga.
4.Q: Waa maxay habka dhoofinta?
A: Alaabadayada waxaa lagu soo rari karaa badda, hawada, iyo Express. hababka loo isticmaalo waxay ku saleysan yihiin miisaanka iyo xajmiga xirmada, iyo iyadoo la tixgelinayo shuruudaha macaamiisha.
5.Q: Miyaan isticmaali karaa soo gudbiyeyga si aan ugu qaado alaabta aniga?
J: Haa, haddii aad leedahay gudbiyahaaga ningbo, waxaad u ogolaan kartaa gudbiyahaaga inuu kuu soo dejiyo alaabtaada. Kadibna uma baahnid inaad na siiso xamuulka.
6.Q: Waa maxay habka lacag-bixinta?
A: T / T, 30% deposit ka hor wax soo saarka, dheelitirka ka hor dhalmada. Waxaan kugula talineynaa inaad beddesho qiimaha oo dhan hal mar. Sababta oo ah waxaa jira khidmad habka bangiga, waxay noqon doontaa lacag aad u badan haddii aad laba jeer ku wareejiso.
7.Q: Ma aqbali kartaa Paypal ama Escrow?
J:Labada lacag bixinta Paypal iyo Escrow waa la aqbali karaa. Waxaan ku aqbali karnaa lacag bixinta Paypal(Escrow), Western Union, MoneyGram iyo T/T .
8.Q: Ma daabacan karnaa calaamadeena u gaarka ah qalabka?
A: Haa, Dabcan.Waxay noqon doontaa farxadeena inaan noqono mid ka mid ah soo saaraha OEM ee wanaagsan ee Shiinaha si uu u buuxiyo shuruudaha OEM.
9.Q: Sidee loo dalbadaa?
A:Fadlan si naxariis leh noogu soo dir dalabkaaga imaal ama fakis,waxaanu kula xaqiijinaynaa PI-ga adiga tirada, logo, iwm
Hore: Wajigu wuxuu muujinayaa 3pcs Rinjiyeynta Rinjiyeynta Sawirka UV Gel Liner Qalabka Buraashka Qalinka Farshaxanka
iibka kulul Alaabta Quruxda Rinjiga caday cidiyaha Farshaxanka D...
30pcs Cidiyaha Qodista Dabiiciga ah waxay dejisay Qalabka Qodista Awooda...
Muunad bilaasha ah oo riixaya cidiyaha aan birta lahayn
Cidi-Cadiyaha Cidida Cidi-Ceriga ee Farshaxanka Cidiyaha
Riixiyaha cuticle birta ah iyo nadiifinta ciddiyaha